Best Free Web Hosting? — MYSTERY ZILLION
August 2011 edited August 2011 in Web Base
I would like to know where is the best free website hosting?? I want to host my Word press, but I can't effort any money for website hosting... Pls help me!
for business or only to write blog ?? , for business you need to buy shared hosted , such as hostmonster, host gator .But for blog , 000webhost, freehostia , awardspace are good. For me awardspace is easy to use .
I just want to do for WordPress blog.. Free + No advertisements
ကျွန်တော်သုံးဖူးသမျှထဲမှာတော့ freehosingcloud.com ကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲကောင် ကမြန်မာနိုင်ငံကို ဘန်းထားပါတယ်။ လိုချင်ပါက ကျွန်တော့် မေးလ်ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ အကောင့်တစ်ခုလုပ်ပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်မေးလ်လိပ်စာကတော့ [email protected] ပါ။ ဒီထက်ပိုကောင်းတာလည်းရှိရင် ရှိအုန်းမှာပေါ့။ သေချာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တခြားလူတွေပါ ထပ်မေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
August 2011 Moderators
Business အတွက်ဆိုရင်တော့ Free hosting ကိုအားမပေးပါဘူး။ ရိုးရိုးပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးချင်ရင်တော့
freezoka , hourb and many so on . One click installer ပါပေမယ့် သိပ်သုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူး။
ads တွေပါတက်သလို UTF-8 မဟုတ်တဲ့အတွက် မြန်မာစာကောင်းကောင်းမပေါ်ပါဘူး <a href="http://m0rris.com/2011/08/11/installing-wordpress-using-ssh/">SSH</a>; နဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ www.000webhost.com မှာတင်ထားတယ်။ မဆိုးပါဘူး ဒါပေမဲ့ မကြိုက်လို့။ www.it-koko.info ပါ.
you can use wget to grab wp lastest release. If you needahosting, pls request to me with ur email address. Thanks
IT_KOKO ကျွန်တော်ဘလော့မှာမေးထားတာတွေ့တယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ဒီမှာပဲဖြေလိုက်တော့မယ်။ ကိုရာဇာပြောသလို wget လုပ်ပြီးတော့ tar -xvzf ကိုဖြေချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် / ကို move လိုက်ရင်ရပါပြီ။ screenshot ကတော့ hosting တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူလို့ပြောရခက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ free hosting တွေက SSH မပါပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုရာဇာဆီကယူထားတာပါ။ cpanel ထဲက SSH console ဆိုတာရွေးပြီးအပေါ်ကအတိုင်းလုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ
000webhost is easy to use. For business try this http://dayday.duoservers.com/
@day .. Bare in mind, this is supportive forum. Neither spammer playground or affiliated spread-out will do. Try to getasmall vps and start your own if you would like to earn or get wet your foot in hosting industry.
thank for your advice @yarzar